The Embassy of the Republic of the Union of Myanmar, Islamabad has launched its official website – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
The Embassy of the Republic of the Union of Myanmar, Islamabad has launched its official website
The Embassy of the Republic of the Union of Myanmar, Islamabad, has launched its website on new website address (http://www.me-islamabad.org). Consular services and visa information, travel information, Myanmar news and other information about Myanmar are available at this website. The Embassy formally launched its website on May 6, 2015.
Dated.7May 2015
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သံရုံး၊ အစ္စလာမာဘတ်မြို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာအသစ် ပြောင်းလဲလွှင့်တင်
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရှိ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သံရုံး၊ အစ္စလာမာဘတ်မြို့ သည် သံရုံး၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်အား ပြောင်းလဲနေသော နိုင်ငံတကာ နည်းပညာများနှင့်အညီ လူထုဗဟိုပြုသော ဝက်ဘ်ဆိုက်အသွင် ပြောင်းလဲလျက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ ကောင်စစ်နှင့် ဗီဇာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ နောက်ဆုံးရ သတင်းအချက်အလက်များ စုံလင်စွာ ပါဝင်သည့် အဆင်အပြင်သစ်ပြုလုပ်ပြီး ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာအသစ်ဖြစ်သော (http:// www.me-islamabad.org) ဖြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မေလ ၆ ရက်နေ့မှ စတင်လွှင့်တင်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် မေလ ၇ ရက်